▷ 🎮 Ọkara 【Ntụle na nbudata ✅】 - 【Ntụnyere】 2022
🎮 Ọkara 【Ntụle na budata ✅】
Spiritfarer bụ nnukwu njikwa 2D na ikpo okwu, mana ewezuga nke ahụ, ọ bụ njem mara mma na nke na-enye ọṅụ ilekọta ndị ọzọ, kweta ọnwụ, ma kwuo nke ọma.
Ihe dị mfe maka Spiritfarer n'ihi na ihe niile ọ na-eme bụ inyere ndị ọzọ aka. Egwuregwu a mara mma na-ebu gị ibu dị oke ọnụ ahịa: mmụọ na-eme nzọụkwụ ikpeazụ ha site na mbara ala echiche efu n'etiti nke anyị na nke na-esote. Dịka onye mmụọ nsọ, ọ bụ ọrụ gị inyere mkpụrụ obi ndị a aka n'oge ikpeazụ ha tupu ha agafee ebighị ebi. Ọrụ a na-agbanwe ngwa ngwa ka ọ bụrụ ihe ụtọ dịka anụ ọhịa ọ bụla nke ụwa ime mmụọ a na-eji ọṅụ na ihe ijuanya. Maka egwuregwu ịnwụ na hapụ, Spiritfarer na-enwe ọñụ, juputara n'ìhè na ndụ, ọ dịghị mgbe ọ na-akwụsị ịbụ eziokwu na nzube ya.
Spiritfarer bụ ihe nrụpụta 2D nwere nnukwu nka nka na njikwa. Ọrụ gị bụ ịnyagharị n'oké osimiri, gaa n'agwaetiti, akara ala na ihe adịghị mma iji kpokọta ma zụlite nkà gị site na ịchọta ụlọ ahịa, akụrụngwa na ọbụna ebe nsọ na-enye nka. Ndụ gị dị ka onye mmụọ abụghị naanị onye na-anya ụgbọ mmiri maka mkpụrụ obi ọjọọ. Kama, ị nọ ebe ahụ iji nyere aka. Ọ bụghị naanị ịnụ akụkọ ndụ gara aga na ịmụ gbasara ndị ọbịa gị; ha nwekwara mkpa ndị a ga-egborịrị tupu ha enwee ike ịga n'ihu.
Ụfọdụ nwere ike ịchọ iri ụfọdụ ihe oriri iji cheta, ị ga-achọkwa ịchọpụta ihe ndị e ji esi nri na ntụziaka iji sie ha. Ndị ọzọ nwere ike ịmasị ịga ebe ndị na-akpali echiche ha, ma ọ bụ ọbụna mụta inwe ahụ iru ala n'onwe ha. Ihe ọmụma na ihe ị na-ebute n'ụgbọ mmiri gị ga-enyere aka ịzụ ahịa gị. Ị ga-emepụta ebe obibi nwa oge maka ndị mmụọ na-ekpebi ịbanye na gị, na-elekọta mkpa ha ma na-ewusi ike gị ike ime njem ndị a, nke mere na mgbe ikpeazụ rutere, ị dịkwa njikere.
Enwere ọtụtụ akụkụ na-akpali akpali na njem a. Ọ dabara nke ọma, Spiritfarer ji akọ na-achịkọta ọtụtụ ngwaọrụ ya n'ime Everlight bara uru, ụdị mma ndị agha Switzerland ethereal. Ihe mkpuchi ọkụ a na-achọ ma onye isi agwa Stella na pusi ya Daffodil (nke a na-egwu na ọnọdụ imekọ ihe ọnụ) ma na-atụgharị n'ọnọdụ ọnọdụ ka ị nwee ike mejupụta ọtụtụ ọrụ. Ị gaghị eme na-enweghị ya ma ọ gaghị agbaji: Everlight dị na ihe niile ị na-eme na anwansi ya na-eme ka ihe niile dị mfe. Ọ na-ewepụ ọrụ na-agwụ ike nke ịkwaga na ịkwado ngwaọrụ ndị a na-ahụ na egwuregwu nchịkwa ndị ọzọ, na n'agbanyeghị nkwado a, ihe ọ bụla Everlight na-aga n'ihu na-ele anya pụrụ iche.
Ịwepụta nrụgide dị ogologo, nke zuru oke iji mejupụta mmịpụta ahụ dị nnọọ iche na mmegharị ahụ na-aga n'ihu na azụ nke isi mkpịsị aka ịhụ osisi ma ọ bụ nanị pịa bọtịnụ ka mmiri gbaa osisi. Nke a na-emetụtakwa iji ụlọ ọrụ nka. Mpempe akwụkwọ kacha ogologo na loom dị iche na bọtịnụ ngwepịa na igwe ihe. Ọbụna na-arụ ọrụ dị iche iche ihe na ogbako a na-aga na-eche dị iche iche, dị ka ma ọ bụrụ na ọla ga-jide na kpọmkwem ikpo ọkụ ebe ofụri gbazee. Enwere ezigbo ngwakọta nke ịdị mfe na ọtụtụ nke na-egbochi omume ugboro ugboro ka ọ ghara inwe mmetụta na-enweghị mmasị na ọbụna mee ka ị nwekwuo mmetụta. Ọ masịrị m ime nke ọ bụla n'ime obere ọrụ ezinụlọ ndị a n'oge egwuregwu m, nke bụ obere ọrụ ebube.
Usoro nke ịchọta akụrụngwa wee weta ha n'ụlọ ọrụ gị iji mepụta ihe na-akwụghachi ụgwọ na-enweghị ngwụcha. Ịchọta ihe oriri ọhụrụ dị ka ịchọpụta mbara ala nke oge na ime ka efere ọhụrụ m nwere ike isi na-akpali. Nchọpụta ịnweta ọhụrụ nwere ike imeghe ohere maka ụlọ ọhụrụ, ụlọ ọhụrụ nwere ike ikwe ka m gbanwee ịnweta ahụ ka ọ bụrụ ihe ọhụrụ. Spiritfarer ka na-ahapụ ohere maka nnwale okike: Maka onye ọ bụla cherela ihe nwere ike ime ma ọ bụrụ na ị tinye akpụkpọ ụkwụ ochie n'ime ebe a na-emepụta ihe ma ọ bụ chọọ ịgba ígwè, ihe nhazi ahụ ekpuchiwo gị n'ụzọ dị egwu na nke mara mma. Ị na-eche na mgbe niile na n'ọnọdụ ọ bụla enwere ntakịrị ihe ị ga-achọpụta n'oge oge egwuregwu ahụ, ma ọ bụghị ka ị ghara ida gị afọ ojuju mmetụta nke ịmụta ihe ndị a na otu esi enweta ihe kachasị na ha.
Ka nkà na ihe onwunwe gị na-abawanye, ụgbọ mmiri gị ga-egosipụta nke a. A ga-ewu ụlọ iji chebe mkpụrụ obi dị iche iche ị metụrụ aka, ị ga-ahụkwa kichin, ubi, akwa na ụdị ọrụ ọha na eze ndị ọzọ. Ka ị na-ebuli elu, ị nwere ike tinye ụlọ ọhụrụ ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe ọ bụla na ụgbọ mmiri gị, nke pụtara na ubi nwere ike ịnọdụ ala n'elu ụlọ na ụlọ nwere ike ịkwado otu n'elu nke ọzọ, na-enweghị ọnụ ọgụgụ ubube na-eru elu igwe na elu site na akwa mmiri gị. Nsonaazụ bụ akpa mara mma nke na-adị ka nke ya mgbe niile na n'ọnọdụ niile. N'ihi na m na-etinye (na mgbe ụfọdụ na-akwagharị na dochie) ihe ọ bụla n'ime ụgbọ mmiri ahụ, enwere m ike itinye ya n'ime ya ma kwaga dị ka à ga-asị na m bi n'ebe ahụ n'ezie. Ọ dabara nke ọma, a na-amata ụlọ nke ọ bụla ozugbo, ma emesịa enwere m ike ịgbakwunye ihe ndị na-agafe agafe dị ka ahịrị zip na akwa bounce, na-enye m ohere iji ọmarịcha na ezi ọ joyụ na-efegharị nso n'ụlọ m na-ese n'elu mmiri.
Ọtụtụ n'ime ọṅụ ahụ na-abịa site na arụ ọrụ nke ikpo okwu Spiritfarer, nke bụ ìhè, arụ ọrụ na mmiri mmiri. Ntugharị ahụ dị egwu ma na-akawanye mma ka ị mara ya. Mmebi ma ọ bụ ọnwụ n'ụdị egwuregwu ọdịnala abụghị ihe ndọghachi azụ, yabụ enwere mmetụta nke nchekwa mgbe niile na n'ọnọdụ niile na-enye gị ohere ịnwale, na mgbagwoju anya nke ihe ịma aka ikpo okwu n'ozuzu dabere na ike gị. . Ime usoro mmegharị (ma ọ bụ ihe doro anya na ọ ga-abụ Nhọrọ). A na-emeghe mmegharị ọhụrụ site na ịchọta ụlọ arụsị, mana ọ bụghị ha niile ziri ezi iji mejupụta egwuregwu ahụ. Nke ahụ kwuru, nka ọhụrụ ọ bụla na-esonye na akụkọ nke ịdị mfe nke ị nwere ike iji mee njem, yana nka nka dị ka nlọghachi, ziplining, slipping, and dashing bụ ihe ụtọ. Enwere mmetụta miri emi dị egwu - ọ dị ka ọ dị mma iji ngwa ọ bụla n'ime ngwa ọgụ gị, ọbụlagodi na ọ bụghị nkenke. Inwe ike ịkwaga ngwa ngwa na ịma mma n'egwuregwu ebe ị na-aga n'ihu na-agba ọsọ site n'otu ụlọ gaa na nke ọzọ na-enyekwa aka mebie omume siri ike nke Everlight site na iji ihe nweere onwe ya na mmiri. Ihe ngosi dị nro, nke ejiri aka dọkpụrụ na-agakwa n'ụzọ dị anya iji mee ka mmegharị ahụ na-adọrọ adọrọ kpamkpam. Ọ na-amasị m ịlaghachi n'ebe ndị nwere ikike ọhụrụ iji chọta ihe nzuzo inyeaka, ọbụlagodi mgbe m na-ekwesịghị inwe, naanị ka m hụ ka m nwere ike isi rute mpaghara ngwa ngwa.
Nlekọta a nke a na-arịọ gị ka ị nye Rebel Souls na-egosipụta nke ọma na nhazi egwuregwu dịka, dịka onye ọkpụkpọ, enwerekwa m nlekọta. Ihe niile ị na-eme na Spirtfarer dị mfe dị ka nrọ na-enweghị isi ebe ihe nwere ike ịga n'ụzọ gị. Obere ihe dị n'ihe ize ndụ; n'ezie ọ dịghị onye nwere ike imerụ ahụ na ọganihu ọ bụla na-eme ka ndụ mmadụ ka mma. Ọ na-apụta ìhè n'ọtụtụ obere nhọrọ, dị ka ụzọ elu ụlọ ụgbọ mmiri gị si agbada n'ime, na-egbochi igwe ikpo okwu na-anụ ọkụ n'obi ịdaba. Ọ bụrụ na ịhọrọ ịwụli elu na ebumnuche, ụgbọ mmiri ahụ na-akwụsị naanị chere. Ọ dịghị ihe ọjọọ, ọ dịghị oge ịgba na ọ dịghị egwu, ma e wezụga egwu nke ịsị nke ọma, isiokwu a na-emeso na-akpachara anya ọkachamara ụzọ.
Ị ga-etinye oge dị ukwuu na ụgbọ mmiri gị na-agagharị na ịgagharị n'àgwàetiti ọhụrụ ahụ, otu a ka ị ga-esi chọta mmụọ ndị chọrọ ọrụ gị. Mmụọ ndị a ọ bụghị naanị na nwa oge na-edozi n'ụgbọ mmiri gị, ebe ị nwere ike ịmekọrịta ma nwee obi ụtọ na ụlọ ọrụ gị dịka iwu n'ozuzu, kamakwa nye ụfọdụ amamihe iji nyere gị aka inwe ọganihu. E wezụga inyere gị aka ịmụta ngwá ọrụ ọhụrụ, ha nwere ike inye uru ndị ọzọ. Ha nwere ike inye aka na nrụzi n'ozuzu, nye akụrụngwa, ma ọ bụ mee ka ndụ dịkwuo ụtọ; ụfọdụ ga-egwu egwu mgbe ha nwere obi ụtọ, nke ga-eme ka ụkpụrụ omume nke ndị ọzọ nọ n'ụgbọ mmiri dịkwuo elu. A sị ka e kwuwe, ịnọ nso na-akpali ndị mmadụ na-ebutekarị ọrịa.
Ma mmụọ onwe ha bụ ihe bara uru ngwá ọrụ na akụ ọnụ; ha bụkwa agwa na-atọ ụtọ n'ezie. Ọtụtụ maara na ndụ nke protagonist; Ọtụtụ ndị maara ma nwee akụkọ gbasara Stella, ụfọdụ ka nwere njikọ, ebe ndị ọzọ na-adị ka ha maara ịhụnanya ya. Onye nke ọ bụla n’ime ha bụ onye ha, ma ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị a kọrọ akụkọ ha na-amasịghị m otú ndị ọzọ nọ, m ka malitere inwe ọmịiko n’akụkọ ha. Ha niile bụ mkpụrụ obi, ndị ghọtara na ihe ga-akwụsịrịrị, ha niile na-ejikwa ya n'ụzọ dị iche.
Otu agwa na-eju ya anya site n'ikpe ọmụma nke enweghị mwute maka ọnwụ nke onye òtù ezinụlọ na-egbu egbu, bụ nke kpọsara m. Ndị ọzọ chetaara m ndị m maara, ma ọ bụ ndị m ga-asị na m mara, dị ka nwanne nna na-ahụ n’anya nke chọrọ nnọọ ka onye ọ bụla rie ezigbo nri. Otu ihe ha niile nwere jikọrọ ọnụ bụ nnukwu ihe ngosi nke na-echetara m ihe nkiri na-atọ ụtọ ma na-akpali akpali site na nwata m. agwa ọ bụla nwekwara ihe nkiri ịmakụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ nke a na-ahazi nke ọma maka imewe gị; E nwere ọtụtụ ụtọ ịhụnanya na obi mgbawa na ọbụna dị ka onye na-enwekarị mmetụta dị ka onye a na-achụpụ n'okwu ndị dị otú ahụ, achọpụtara m ọtụtụ ihe jikọrọ ya.
Ọ bụ ihe ịtụnanya na-emetụ n'ahụ ka agwa onye ọ bụla si emesị mata na oge agwụla. Enwere ebe udo na nnabata ebe onye ọ bụla na-abịa, ọ bụrụgodị na ha achọghị. Isi okwu n'ozuzu bụ na onye ọ bụla nwere oge ya nakwa na ihe niile dị mma. Ndụ ha biri bụ nke ha, ọ pụkwara ịbụ na ha na-ewute ha, nwee obi ụtọ, ma ọ bụ ọbụna ndị na-adịghị eju afọ. Spiritfarer na-atụ aro na ọ bụghị maka ịhụ ihe ọma na njem anyị na nke ọjọọ, kama ịhụ njem dịka nke anyị. Ndụ anyị bụ akụkọ e dere naanị ka anyị wee mee ike anyị niile, ihe ọ bụla merenụ, wee hụ oge anyị ka agwụla wee nweta afọ ojuju na enyemaka nke na-abịa na ịhapụ.
Otu esi ebudata Ọkara
Karden, Allan (Onye edemede)